Mediam-bahoaka · Jolay, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Jolay, 2010
Avrily 2021 10 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Jolay, 2010
Myanmar: Resaka manodidina ny amboara eran-tany
Azia Atsinanana12 Jolay 2010
Nahazo ny aretin'ny amboara eran-tany 2010 i Myanmar. Lasa ara-dalàna ny herinaratra any amin'ny renivohitra, afaka mijery ireo lalao maimaim-poana eny amin'ireo fahitalavitry ny fanjakana ireo mpankafy, misokatra mandritry ny sasak'alina ireo bara sy ireo fisotroana dite, ireo gazety ny fanatanjahan-tena dia nahazo fahazahoana hamoaka vaovao isanandro, ary maro ireo...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Jolay 2010
Japana: Fihaonana eo ambany lanitra rakotra kintana
Jereo ny lanitra amin'ny alin'ny 7 Jolay satria mandritra io alina iray ihany ao anatin'ny taona, no voatendry fa hihaonan'ireo kintana roa Vega sy Altair, araka ny lovan-tsofina.
Brezila: Ny baolina kitra sy ny fitiavan-tanindrazana nandritra ny mondialy
Amerika Latina10 Jolay 2010
Maro ireo mpitoraka bilaogy any Brezila no nanakiana ny fivadibadiky ny onjan'ny fitiavan-tanindrazana niseho tamin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny amboara eran-tany . Endriky ny foto-kevitra fasista ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny sasany, raha toa ka midika fahadisoam-panantenana kosa ny ekipa Breziliana ho an'ny hafa ka aleon'izy ireo manohana ny ekipam-pirenen'i Arzantina .
Etazonia, Rosia: Miady hevitra momba ny ‘Mpitsikilo 2.0′
Amerika Avaratra08 Jolay 2010
Lasa lohahevitra ifotorana amin'ny aterineto Rosiana nandritra ny herinandro ny fisamborana olona 11, izay voalaza fa mpikambana ao amina tambajotrana mpitsikilo Rosiana. Mamintina ny adihevitra tamin'ny aterineto i Alexey Sidorenko.
Brunei: Miteraka resabe ao amin'ny aterineto ny fisarahan'ny Mpanjaka
Azia Atsinanana07 Jolay 2010
Tamin'ny volana lasa teo iny, nanambara ny fisarahany tamin'ny vadiny fahatelo avy any Malezia ny Sultanan'i Broney. Taorian'ny fanambarana dia samy nimonomonona mikasika ilay vaovao avokoa ireo twitters sy blaogy, na izany avy any Malezia, na avy any Broney. Maro no naneho ny alahelony raha ny hafa kosa maminavina izay...
Ukraine: Fahafatesana mifono zava-miafina tao amin'ny Zoo ao Kiev
Eoropa Afovoany & Atsinanana06 Jolay 2010
Nanintona ny sain'ny media nentin-drazana sy ny fampahalalam-baovao avy amin'lon-tsotra ny Kiev Zoo noho ireo tranga nanaitra niseho tao aminy tato ho ato: nisy biby vitsivitsy maty noho ny antony tsy fantatra tao amin'io Zoo io nandritra ny taona lasa iny.
Masedonia: Dingana folo hitantanana repoblika fôpla
Kopach, mpanoratra matoandahatsoratra ho an'ilay vohikala tsy miankina Okno.mk, no namoaka lisitra iray [MKD] mitondra ny lohateny hoe “Fomba 10 hitantanana fitondràna anaty tanin'akondro.” Ilay mpanoratra mitondra ny solon'anarana midika hoe “Mpihady” amin'ny fiteny Masedoniana, dia nanoratra fa nahazo aingam-panahy sy nampiasa ireo boky Year 501: The Conquest Continues [taona...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Jolay 2010
Ny fahitana ireo entana vita avy any Israely dia mbola miteraka hatairana manerana ireo firenena Arabo. Osama Al Romoh avy any Jordania dia mampiseho ny hatairany (Ar) rehefa nahalala fa manome akanjo famoahana voafono kitapo vita avy any Israely an'ireo mpianany ny Anjerimanotolo lehibe iray.